Izibonelelo zethu -Yuyao Jera Line Lokulinganisa Co., Ltd.
UJera uzibophelele ekunikezeleni iinkqubo zokukhuphisana nezibandakanya bonke abasebenzi bethu. Izibonelelo zethu zibandakanya ezi nkcukacha zilandelayo:
Umtsalane Wokuhlawula iPhakheji
UJera unika abasebenzi ipheyinti yokuhlawula enomtsalane kunye nendawo yokusebenza ekhuthaza ukukhula kunye nophuhliso.
Ukongeza kumvuzo okhuphisanayo, sinika uluhlu olubanzi lwezibonelelo kubasebenzi bethu kubandakanya umvuzo weqela lokuThengisa, intlalontle yokuhamba kwabasebenzi, inkxaso-mali yeholide yesiNtu njlnjl. iziqinisekiso kunye nokuzola izakhono zabo ukuze benze umahluko wokwenyani kwikamva labo.
Impilo nokuba sempilweni
UJera ubhatala ingqalelo yomqeshwa ngamnye ngokwasemzimbeni nangokwasengqondweni.
Sibonelela nge-inshurensi yobomi esisiseko kunye nokuhlolwa rhoqo kwezempilo. Sibamba iintetho zentlalontle rhoqo kunye nemisebenzi yokwakha amaqela ukunceda abantu bethu bazive bakhulu kwaye bakhe ukuqonda okunzulu kunye nobudlelwane phakathi kwethu.
Ixesha elihlawulelweyo liphumile （PTO）
UJera ubonelela ngexesha elinesisa lokuhlawula ixesha lekhefu lonyaka kunye neeholide zesiko zesiko. Siyaliqonda ixabiso lokungabikho emsebenzini, kuvumela abasebenzi ukuba babe nethuba lokuzihlaziya kwaye babe kwimeko engcono yokuqhubeka nobomi nomsebenzi.
Ukongeza, sihlawule ixesha lokudibanisa umntwana kunye nokugula emsebenzini, okunceda abasebenzi bethu ukuba babe nezibonelelo ezisisiseko zokuhlala xa bengekho emsebenzini.
UJera ukholelwa ukuba impumelelo yenkampani kunye nobutyebi buxhomekeke kubantu bayo, sityala imali kubasebenzi bayo kuyo yonke imisebenzi yabo kunye nenkampani ukubanceda baphuhlise ngokupheleleyo iitalente zabo kunye nobungcali.
Sinikezela ngoqeqesho nophuhliso ukomeleza ubuchule babantu bethu kwaye sibaxhobise ngezakhono, kubandakanya nophuhliso lobunkokeli, ulawulo lweeprojekthi, ukuthengisa kunye nezakhono zothethathethwano, ulawulo lweekhontrakthi, uqeqesho kunye nolawulo lobudlelwane babathengi. Indima yabo yangoku kodwa babalungiselele ukuthatha indawo enzima ngakumbi kwixa elizayo.